यी हुन् ‘नेपाल लोक स्टार’का टप ८ प्रतिस्पर्धी
भाद्र २८, काठमाडौं । मौलिक रियालिटी शो (सांगीतिक प्रतियोगिता) ‘नेपाल लोक स्टार’मा अब आठ जना प्रतिस्पर्धी बाँकी छन् । बिहीबारको प्रस्तुतीका आधारमा शुक्रबार मुना अर्याल बाहिरिएपछि आठ जना प्रतिस्पर्धी बाँकी रहेका हुन् ।
मुना उत्कृष्ठ नौसम्म आइपुग्ने एकमात्रै महिला प्रतिस्पर्धी हुन् । अब ‘नेपाल लोक स्टार’मा पुरुष प्रतिस्पर्धी मात्रै बाँकी छन् । अडिसन राउण्डमा सात प्रदेशबाट ५० जनाका दरले ३५० जना हुँदै जज राउण्डबाट मेघा अडिसनमा आइपुगेका १०९ जनाबाट २५ प्रतिस्पर्धी छनोट भएका थिए ।
जसमध्ये तीन जना गोल्डेन स्टार विजेता थिए । टप २० देखि ८० प्रतिशत भोटिङ र २० प्रतिशत निर्णायकको नम्बरका आधारमा ‘शो’मा प्रतिस्पर्धीको निर्णय भइरहेको छ । हरेक विहिबारको एपिसोडमा निर्णायकको सर्वाधिक नम्बर पाउने प्रतिस्पर्धी आईएमई पर्फर्मर अफ डे घोषित हुँदै स्वत सुरक्षित हुने र शुक्रबारको एपिसोडमा भोटिङ राउण्डबाट सर्वाधिक भोट प्राप्त गर्ने स्वत अघिल्लो चरणमा पुग्ने नियम रहेको छ ।
शुक्रबार २४ औं श्रृंखला प्रशारण भएकाे नेपाल लाेक स्टर ३६ औं श्रृंखलासम्म प्रशारण हुने छ । कार्यक्रमका विजेताले कार सहित नगद रु ५० लाख रुपैयाँ पाउने छन् । आयोजकका अनुसार दोस्रो हुनेलाई २५ लाख (करसहित) र तेस्रो हुनेलाई १० लाख रुपैयाँ (करसहित) पुरस्कार प्रदान गरिने छ ।
‘नेपाल लोक स्टार’को निर्णायकहरुमा जयनन्द लामा, सुनिता दुलाल, रामजी खाँड र बिबि अनुरागी छन् । कार्यक्रममा हरेक हप्ता अतिथि निर्णायकहरुलाई निम्त्याउने गरिएको छ ।
यी हुन् अबका उत्कृष्ट ८ प्रतिस्पर्धी
१. शनी विश्वकर्मा
गोल्डेन स्टार प्राप्त तीन प्रतिस्पर्धीहरुमध्ये रोल्पा जम्कोटका १८ वर्षीय शनी विश्वकर्मा नेपाल लोक स्टारका उत्कृष्ट ८ प्रतिस्पर्धी मध्यका एक हुन् । अडिसन राउण्डमा चार जना निर्णायक सबैले ५/५ वटा स्टार दिएमा गोल्डेन हुने गर्दृछ र सिधै उत्कृष्ट २० मा पुग्ने नियम छ । सोही नियमका आधारमा उनी सयौं प्रतिस्पर्धीहरुबाट सिधै उत्कृष्ट २० मा पुग्न सफल भएका हुन् ।
सानैदिख गीतसंगीतमा रुचि राख्ने उनले अडिसन राउण्डमा तिरिरी मुरली बज्यो बनैमा गीत गाएर नेपाली लोक स्टारमा पहिलो गोल्डेन स्टार प्राप्त गरेका थिए । यसका अलावा उनले कलकते काइयो, सालको पात टपरी, पिँढीमा बसेर, राम्दी पुल, पानीको फोकाजस्तै, सुनपानी लगायतका गीत गाएर उत्कृष्ट ८ सम्मको यात्रा तय गरेका हुन् ।
तीन पटकसम्म आइएमई पर्फमर अफ डे र भोटङ राउण्डमा एक पटक सर्वाधिक भोट प्राप्त गरिसकेक छन् । यस हप्ता पनि आइएमई पर्फमर अफ डे घोषित भई सिधै उत्कष्ट ८ मा पुगिसकेका छन् ।
हाल दाङ बस्दै आएका रोल्पाका शनी नेपाल लोक स्टारमा सहभागी हुन पहिलो पटक काठमाडौं आएका हुन् । पारिवारिक पृष्ठभूमी सांगीतिक नभए पनि उनलाई गीतसंगीतमा लाग्न परिवारको पूर्ण सहयोग छ ।
उनले एउटा गीत पनि रेकर्ड गराइसकेका छन् । तर त्यो बजारमा भने आइसकेको छैन । लोकगीतसँगै अरु विधाका गीत पनि उत्तिकै गाउन सक्ने उनलाई राजेशपायल राई, राज सिक्देल, शिव परियार र रामजी खाँड मन पर्ने गायक हुन् ।
२. चेतन गोतामे
स्याङ्गजाका ३० वर्षीय चेतन गोतामे नेपाल लोक स्टारका उतकृष्ट १० प्रतियोगी मध्येका एक हुन् । वर्षायाम लाग्यो, शीरै लाउने शीरफूल, बाल जोवन, सोह्र वर्षे उमेरैमा, नाचीदेउ मैच्याङ्ग, लुकीलुकी सेती बग्यो, भन्थ्यौ आमा नेपालमा, हर साल आई मागी, आमा रुँदै लगायत गीत गाएर उत्कृष्ट ८ मा आइपुगेका चेतनलाई गीतसंगीतले बचपन देखी नै मोहनी लगाएको हो ।
घरमा कोही आयो भने मादल निकालेर बजाउँदै त्यसमा गीत गाएर सुनाउने उनको बानी थियो । परिवारमा सांगीतिक क्षेत्रमा कोही नभए पनि उनले भने संगीतलाई नै आफ्नो कर्म क्षेत्र बनाएका छन् ।
उदीतनारायण झा, विष्णु माझी, पुरुषोत्तम न्योपानेको स्वर सुनेर उनी आजसम्म अघाएका छैनन् । राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी प्रतिष्ठाले ०७४ मा आयोजना गरेको एकल दोहोरी प्रतियोगितामा सान्तवना पुरस्कार हात पारेका चेतनले ६६ सालदेखि गीत गाउँदै आएका छन् । उनले ५ दर्जन गीत गाइसकेका छन् ।
३. रामकुमार नेपाली
रामेछापका २७ वर्षीय रामकुमार नेपाली नेपाल लोक स्टारमा गोल्डेन स्टार पाएका प्रतिस्पर्धी हुन् । हिउँ खोलीको चिसो पानी, नाचिदेउ मैच्याङ्ग सोह्र वर्षे उमेरैमा, आकाशैको कालो बादल जस्ता गीत गाएर दर्शक तथा स्रोताको मन जित्दै आएका उनले उत्कृष्ट ८ सम्मको यात्रा तय गरिसकेका छन् ।
वाल्यकाल देखि नै बुवासँगै गीत गाउँदै हिँड्ने रामकुमारले गाउँमा हुने विवाहमा सयौं गीत गाउँदै हिँडेका छन् । ०६३ बाट गीत रेकर्ड गराउन थालेका उनको लय तथा शब्दमा स्वर्गमा चुले निम्तो छ रेकर्डक भइसकेको छ ।
काठमाडौंका कयौं दोहोरी साँझमा काम गरिसकेका रामकुमार अहिले फूलबारी दोहोरी साँझमा गाएर जिविकोपार्जन गरिरहेका छन् । स्कुलमा ८० रुपैयाँ तिर्न नसकेर काठमाडौं छिरेका उनले पछि डाक्टर पढ्ने छात्रबृत्ति पाउँदा पनि त्यसलाई लत्याएर सांगीतिक क्षेत्रमै लागे । सुरुमा गीतसंगीतमा नलाग् भन्ने उनका बुवा अहिले छोरोले सांगीतिक आकाशमा सफलता चुमेको हेर्ने सपना पालेर बसेका छन् ।
सांगीतिक क्षेत्रमै जीवन समर्पण गर्ने अठोट गरेका रामकुमारलाई नवीन खड्का, कुमार बस्नेत, नारायण रायमाझी मनपर्ने गायक हुन् ।
४. पविन्द्र सुनार
बाजुरा स्थायी घर भएका १८ वर्षीय पविन्द्र सुनार नेपाल लोक स्टारमा अडिसन राउन्डमा गोल्डेन स्टार पाएर सिधै उत्कृष्ट २० मा आइपुगेका प्रतिस्पर्धी हुन् । राज सिक्देल, शिव परियार, रामजी खाँडको स्वर मन पराउने उनी बच्चैदेखि गीतसंगीतका पारखी हुन् ।
नेपाल लोक स्टारमा कलकत्ते काइँयो, चुरी छमछम, रेशम फिरिरी, कलिलो तामाले, लुट्न सके लुट कान्छा, खानी खोला गीत गाएर उनले उत्कृष्ट ८ सम्मको यात्रा तय गरिसकेका छन् ।
स्कुलमा छँदा शिक्षकहरुले पविन्द्रको स्वर मन पराएर गाउन लाउँथे । साथीहरु हौस्याउँथे । उनको स्वरको चर्चा स्थानीयस्तरमा राम्रै हुन थालेको थियो । धनगढी आएपछि खप्तड सांस्कृतिक परिवारमा आबद्ध भए । गाउन थाले । स्थानीय शोमा उनलाई बोलाउन थालियो । टिकापुर महोत्सवमा गाउने अवर पाएपछि उनको प्रतिभाले अझै फैलिने अवसर पायो ।
सुदुरपश्चिमका मेला महोत्सवमा उनलाई डाक्न थालियो । परिणाम उनले सुनचाँदीको पेशा छोडेर गीत गाउँदै हिँड्न थाले । अहिलेसम्म उनको स्वरमा एउटा गीत पनि रेकर्ड भइसकेको छ । तर बजारमा भने आएको छैन । गीतसंगीत बाहेक आफूले अहिले अरु केही पनि देख्न छोडेको बताउने पविन्द्र आफ्नो भविश्य संगीतमा खोजिरहेका छन् ।
५. रविराज शाह
भारतमा बसेर गीतसंगीतमा क्रियाशील २७ वर्षीय रविराज नेपालमा पनि चिनिन सकुँ भनेर नेपाल लोक स्टारमा सहभागी हुन आए । ०६७ मा रेडियो नेपालबाट स्वर परीक्षा पास गरेका उनले नेपाल लोक स्टारमा भोजपुरी गीतसँगै नेपाली लोक गीत गाउँदै उत्कृष्ट ८ सम्मको यात्रा तय गरेका हुन् ।
टुङ्गनाको धुनमा, गलबन्दी, बल्लबल्ल भेट भयो, अवध नगरी लगायतका गगी गाएका उनलाई तराईको मैथिली र भोजपुरी गीत पनि नेपालकै गीत हो र पहाड र हिमालको गीत पनि तराईको गीत हो भन्ने सन्देश दिनु छ ।
सानै देखि गीतसंगीत भनेपछि हुरुक्कै हुने रविराजले सर्लाहीका स्थानीय ब्यान्डमा बसेर थुप्रै गीत गाएका छन् । ०६२ सालतिर अर्केष्टामा गीत गाएर १५० देखि हजार रुपैयाँसम्म लिएर उनलाई याद छ । श्रुतीसंगीत महाविद्यालयमा संगीतको साधना गरेका रविराजले चलचित्र प्रेमलिलाको गीतमा संगीत गरिसहेका छन् । टि सिरिजका लागि गाइसकेका छन् ।
एक दर्जन गीत कम्पोज गरिसकेका उनका गीत वारिस खान, राजा हसनले गाइसकेका छन् भने अञ्जु पन्तको स्वरमा पनि गीत रेकर्ड भइसकेको छ । संगीत साधनाको विकल्प आफूले सोच्न पनि नसक्ने उनी बताउँछन् ।
६. विनोद दनुवार
उदयपुरका २६ वर्षीय विनोद दनुवारले गोठालो तथा मेलापात जाँदा गीत गाउन सिके । त्यहीँबाट उनलाई गीतसंगीतको नसा लाग्यो । चार वर्ष मलेसिया बस्दा पनि उनलाई गीतको नसाले छोडेन । जता गीत बज्यो उतै कुद्ने उनी कतै गीत गाउन पाइन्छ की भन्ने आशैआशमा बस्थे ।
नेपाल फर्किएर गीतसंगीतमै अवसर खोजीरहेका बेला नेपाल लोक स्टार सुरु भयो । त्यहीँ उनले भाग लिए । भैटैमा भयो सोल्टी ज्यू, कर्मै हारा, बाँजो खेतमा, घर त हिले हो, नौजाले मायाँ र धनकुटा डाँडा बजार गाएर उत्कृष्ट १० मा आइपुगेका उनलाई सांगीतिक क्षेत्रमै आफ्नो भविशय खोज्न मन छ ।
राजेशपायल राई, हेमनत कान्छा, राजु परियार उनलाई मन पर्ने गायक हुन् ।
७. दीपेन्द्र राई
देउसी भैलो र स्कुलमा गीत गाउँदा गाउँदै संगीतका सुरु बिना बाँच्न नै हम्मेहम्मे पर्नेरछ भन्ने अनुभव गर्न थाले भोजपुरका ३५ वर्षीय दीपेन्द्र राई ।
पुर्वेली लोक भाका गाउँदै नेपाल लोक स्टारको उत्कृष्ट १२ मा आइपुगेका दीपेन्द्रले धरान धनकुटा, सलल पानी, मालिङ्गा काटी, झमझम स्टकोट, वाइरोटको बााटोमा, आकासैमा चिल होइन, वारी जमुना लगायत गीत गाएर प्रतिस्पर्धीलाई पछि पार्दै आइरहेका छन् ।
राजेशपायल राई, जीतेन राई, सुगम पोखरेल, प्रमोद खरेल उनलाई मन पर्ने गायक हुन् । नेपाली तारा सिङ्गगिङ्ग स्टारमा भाग लिइसकेका उनी पूर्वाञ्चल रेकर्डिङ्ग स्टुडियोमा काम गर्छन् ।
सांगीतिक क्षेत्रमै भविश्य खोजिरहेका दीपेन्द्र राईले करिब तीन दर्जन गीत गाइसकेका छन् । संगीत नै जीवन हो भन्ने उनी संगीत बिनाको जीवन अधुरो हुने बताउँछन् ।
८. प्रभुराज पाण्डे
बाजुराका ३१ वर्षीय प्रभुराज पाण्डेले डेढ वर्षको उमेरमै आमा गुमाए । बुझ्ने हुँदै गएपछि आमा गुमाउँदाको दुःख भोग्न थाले । विछोडको त्यही पीडा र बेदनामा उनी ठाडी भाका गाएर मन बुझाउँथे । सायद बेदनामा गीत गाउँदा गाउँदै उनको स्वर माझियो ।
ओखर बोट, स्वर सम्राट, किङ्ग प्यालेस लगायत दोहोरी साँझमा दोहोरी गाएका प्रभुराज अहिले नेपाल लोक स्टारको टप ८ मा आइसकेका छन् । बालो नाच, ठाडी भाका (देउडा) राई झुम, यो नानीको शीरैमा, बेली चमेली, जिम्वाल वाको आगनीमा, सुनकोषी पूर्व पर्यो, मलाई अमेरिका यही लगायत गीत गाएर आफ्नो प्रतिस्पर्धीसँग प्रतिस्पर्धा गर्दै आएका प्रभुराजलाई राजु परियार, रामजी खाँड र प्रकाश थापा मनपर्छ ।
विछोड, दुःख र त्यसबाट सिर्जित बेदनाले गाएक बनेका प्रभुराजले ५ वटा गीत रेकर्ड पनि गराइसकेका छन् । आफ्नो स्वर लोक गीतकै लागि फिट हुने बताउने उनी शिक्षकको जागिर छोडेर संगीतमा होमिएका हुन् । गीतसंगीतलाई नै पेशा बनाएका प्रभुराज विछोड बोल्ने गीतका पंक्ति पंक्तिले आफ्नै जीवन कथा भनेकको अनुभुत गर्छन् ।
गायक सञ्जीव पराजुलीलाई किन छैन पीर ? (भिडियो)
गीतकार तारा डाँगीको शब्दमा बनको चरी बनैमा (भिडियो सहित)
‘हाम्रो भुमी फिर्ता गर’ भन्दै भारतलाई चेतावनी (भिडियोसहित)
क्रान्ति के.सी.को निर्देशनमा यस्तो बन्यो बर पिपलुको म्युजिक भिडियो
वास्तविक श्रमिकको आवाज बोल्ने सर्ट फिल्म ‘मे वान’ सार्वजनिक
सारिका र योगेशको ‘मायाको सुगन्ध’ ट्रेन्डिङमा सरोज र आस्मा रोमान्टीक(भिडियो सहित)
८ वर्षीया बालिकाको फेसबुक लाइभ चर्चादेखि नाई नभन्नु ६ फिल्ममा खेल्ने अफरसम्म
तीन दिनदेखि सल्यानका १७ जना काेराेना संक्रमित विद्यालयकाे क्वारेन्टाइनमै
सल्यानकाे कपुरकाेटमा पनि देखियाे एकजनालाइ काेराेना संक्रमन
सल्यानकाे कुमाख गाउँपालिकामा देखिए २ जना काेराेना संक्रमित